Sorona Masina ny 17/04/2021 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 17/04/2021
Lucien Botovasoa, Olontsambatra
Teraka tao Vohipeno (faritra Vatovavy Fitovinany) tamin’ny taona 1908 i Lucien Botovasoa. Vita batemy tamin’ny 1922 izy ary lasa mpampianatry ny sekoly katolika tao. Nanam-bady aman-janaka izy ary mpanolo-tsainan’ny tanàna. Mpitaiza tian’ny tanora erý, tia hira sy mozîka izy, sady olona falifaly lalandava. Nanorina ny Fikambanana Tersieran’i Md François tao Vohipeno izy ary lasa mpivavaka andro aman’alina fa te ho olomasina sy martiry aza. Naleony hovonoina tamin’ny 1947 toy izay hanaiky hiara-miasa amin’ny mpamono sy mpanenjika eglizy, ary nanolo-tena ho fanavotana ny rahalahiny sy ny tanindrazana izy. Notapahin-doha teo amoron’ny Matitanana i Lucien Botovasoa tamin’ny 17 avrily 1947, ary ninoan’ny mponina teo no eo fa olomarina martiry mpiahy ny tanindrazany tokoa izy.
Avia ianareo, ry nohasoavin’ny Raiko,
handova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo
hatrizay nahariana an’izao tontolo izao. Aleloia.
Andriamanitra ô, nataonao nanaraka ny lalan’ny Vaovao Mahafaly sy nampianatra azy i Lucien Botovasoa olontsambatra, hatramin’ny fandatsahana ny ràny eo am-pivavahana ho an’ireo namono azy; ka omeo anay koa, noho ny vavaka ataony, mba ho tonga mpianatra mahatoky sy vavolombelon’ny Zanakao maty teo ambonin’ny hazofijaliana ary nitsangan-ko velona,
Fa Izy Andriamanitra velona miaraka aminao ao amin’ny Fanahy Masina amin’ny taona rehetra mandrakizay. Amen.
Taratasy voalohan’i Masindahy Joany Apostôly
1 Jo. 5, 4-10
Ny finoantsika no entina handresena an’izao tontolo izao..
Ry malala: izay naterak’Andriamanitra dia mandresy an’izao tontolo izao, ary ny fandresena izay naharesy an’izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza àry no maharesy an’izao tontolo izao, afa-tsy izay mino fa Jesoa no Zanak’Andriamanitra? Dia izy no ilay avy tamin’ny rano sy ny ra; tsy tamin’ny rano ihany, fa tamin’ny rano sy ny ra; ary ny Fanahy no manambara, satria ny Fanahy no fahamarinana. Fa misy telo no manambara [any an-danitra, dia ny Ray sy ny Teny sy ny Fanahy Masina; ary izy telo ireo dia mifanaraka. Misy telo koa no manambara ety an-tany], dia ny Fanahy
sy ny rano sy ny ra; ary mifanaraka tsara izy telo ireo. Raha ny fanambaran’ny olona aza raisintsika, mainka fa ny fanambaran’Andriamanitra izay lehibe lavitra; ary ny fanambaran’Andriamanitra, dia ny nanambarany ny Zanany indrindra. Koa izay mino ny Zanak’Andriamanitra dia manana izany fanambarana izany ao anatiny.
Fiv.: Tompo ô, apetrako eo an-tananao ny aiko.
Metia, ry Vatolampy fierena!
Vonjeo aho, ry Trano fiarovana!
Ianao no haram-bato sy toera-mafy ho ahy,
ny Anaranao itarihana sy itantanana ahy!
Apetrako eo an-tananao ny aiko,
avoty aho ry Tompo Andriamanitra!
Ianao kosa no ifefeko!
Mibitaka sy ravo aho.
Asehoy ny mpanomponao ny tavanao!
Vonjeo aho noho ny hatsaram-ponao!
Ny fieren’ny tavanao no anafenanao azy,
Lavitra ny tetika ataon’ny olona.
Ny teninao, ry Tompo, no fahamarinana;
hamasino amin’ny fahamarinana izahay.
Jo. 17, 11-19
Ankamasino amin’ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao no fahamarinana.
Tamin’izany andro izany dia niandrandra ny lanitra i Jesoa ka nivavaka hoe:
«Ray masina ô! Tahirizo amin’ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray tahaka antsika izy. Raha mbola teo amin’izy ireo aho dia nitahiry azy tamin’ny anaranao. Eny, nitahiry izay nomenao ahy aho, ka tsy nisy very izy na dia iray aza, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana, mba ho tanteraka ny Soratra Masina.
Ankehitriny mankany aminao aho, ka manao izany fangatahana izany dieny mbola amin’izao tontolo izao, mba hananan’izy ireo ny fifaliako tanteraka ao aminy. Nomeko azy ny teninao, ka halan’izao tontolo izao izy ireo, satria tahaka ny tsy maha-olon’izao tontolo izao ahy no tsy maha-olon’izao tontolo izao azy koa. Tsy ny hanesoranao azy amin’izao tontolo izao no angatahiko, fa ny hiarovanao azy amin’ny Ratsy.
Tahaka ny tsy maha-olon’izao tontolo izao ahy no tsy maha-olon’izao tontolo izao azy ireo koa. Ankamasino amin’ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao no fahamarinana. Tahaka ny nanirahanao ahy ho ao amin’izao tontolo izao no nanirahako azy ho ao amin’izao tontolo izao koa. Manamasina ny tenako ho azy ireo aho, mba hohamasinina amin’ny fahamarinana koa izy».
Tompo ô, mahatsiaro ny hasarobidin’ny fahafatesana nihatra tamin’ireo Olomasinao izahay, ka manolotra ilay sorona nanovozany ny herim-po nijoroany ho Martiry.
Amin’ny alalan’i Kristy Tomponay. Amena.
Zavatra iray loha no angatahiko amin’ny Tompo, sady iriko fatratra: dia te honina ao an-tranon’ny Tompo aho amin’ny andro rehetra iainako, mba hifaly amin’ny toetra maha te ho tian’ny Tompo, sy hibanjina ny fitoerany masina.
Tompo ô, nandray ny fanomezanao avy any an-danitra izahay ka faly mankalaza ny andro anio; koa mihanta aminao: enga anie izahay manambara ny nahafatesan’ny Zanakao amin’izao fanasana masina izao mba hiombona anjara aminy nitsangan-ko velona sy be voninahitra miaraka amin’ireo Martiry masina.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [1.8151 s.] - Hanohana anay